Otu esi eteta ime mmụọ - Afrikhepri Fondation
wednesday, Eprel 14, 2021
Lokuko anyi batara n'ime uwa, mgbe amuru anyi, a na-etinye anyi nkpudo nke nchefu n'isi nke mere na anyi amaghizi banyere ndu anyi gara aga, ma obu ihe butere anyi ebe a; egwuregwu niile nke ndụ na-eteta, iji cheta ihe kpatara anyị ji ebi, na-eto eto na mmụọ na ịhụnanya, na ihe anyị bụ, nke ahụ bụ ịsị mmụọ dị n’anụ ahụ na ọbara soro mkpụrụ obi anyị nke bụ igbe ojii bụ ndị na-edekọ ihe ọma niile anyị na-eme n'oge ndụ anyị niile.
Nsogbu nke bilitere maka anyị bụ ịchọpụta n'onwe anyị, naanị anyị, dịka egwuregwu nke ndụ chọrọ, ụzọ ga-eduga anyị na edemede, ụfọdụ nwere ọchichọ ịbụ ndị amụrụ nwere ikike dịka ha rutere ebe ahụ ngwa ngwa, mana ọnụ ọgụgụ ka ukwuu dị na njuju zuru oke, yabụ gịnị?
Ihe omumu a siri ike karie ma anyi no na onodu ndi isi ike ma oburu na anyi ekwenyeghi na onye okike, ihe di nkpa di nkpa, ma mgbe anyi chebara na enyere ihe nile aka na ndụ bụ iwu nke ọhịa, ya mere nke kachasị ike.
Site n'ebe a na-ekwe ihe niile na edemede ga-eme ma ọ bụrụ na ọ na-ewere ọnọdụ tupu "nloghachi" na ụwa mmụọ (na ọnwụ) site na ezigbo electroshock; ọtụtụ oge ihe na-egbu mgbu, ihe na-egbu mgbu (ọnwụ nke onye a hụrụ n'anya, ma ọ bụ nke ọrụ ha, wdg) ịmanye ndị furu efu ịjụ onwe ha ajụjụ, ka ha "gbakee" site n'iche echiche, nke nwere ike iduga ha icheta uche ya.
Maka ndị na-enweghị nsogbu a na maka ịdị adị nke Onye Okike enweghị obi abụọ ọ bụla, ajụjụ ahụ ka dị: otu esi eteta, mmadụ kwesiri ịgbaso nke a ma ọ bụ guru, nke a ma ọ bụ okirikiri ahụ?
N'ime ụwa ebe "usoro kpakpando" na-ewu, nke a bụ ọnwụnwa kachasị mfe; n'oge a ọtụtụ n'ime ha na-arọ nrọ oge awa ha dị ebube, onye ọ bụla chọrọ ịdọrọ mkpuchi ahụ ka ndị ọzọ wee kwanyere ya ùgwù, ka ị bụrụ kpakpando na nke ahụ niile dị mma, ruo mgbe ha debere ha n'okwu ụgha iji chịkwaa ha. ma chekwaa ọchịchị nke mmadụ nwere n’ebe ha nọ, ya mere ha na-ekwere ihe ọ bụla a gwara ha.
Onye ọ bụla na-arọ nrọ ka ọ bụrụ onye a ma ama, onye site na ịnọ na TV, onye site na igbu mmadụ, onye site na izu ohi, onye site n'ụlọ mkpọrọ… Ọ na-abụkarị eziokwu nke ndị na-amụtabeghị ụra na mmụọ; o dighi adi nma, mana o bu kari amaghi ama.
N'aka nke ozo, otutu bu ndi ghotara Iwu nke ihunanya, teta ma meghekwa n'onwe ha ikike ufodu, nke agbanyeghi nke achoro ha, site na iwu nke ihunanya, isoro ndi ozo kerita ma nke ha ji. na ntụzịaka, ịdobe ndị ọzọ n’ike ha, uche ha, na-ele anya iwepụta ego ma ọ bụ uru ndị ọzọ, ma ọ bụ naanị maka ịchịkwa, ọtụtụ omume ndị megidere Iwu nke 'ịhụnanya.
Ndị a bụ ndị a mara ikpe karịsịa n'ihi na imebi Iwu ịhụnanya na ụkpụrụ ya nke iguzosi ike n'ezi ihe n'adịghị mma ọ bụla, ọ bụ ihe metụtara ọtụtụ ndị ndú okpukpe, ọbụnadị nke ime mmụọ, taa.
N'ezie, mgbe onye ahụ mara kwesiri ikwuputara ndi ozo ihe o mara n’efu na n’enweghi ihe ozo, ma ewezuga m were ohere a mee mepa culpa banyere usoro ekpere m gha egosiputa n’ederede a maka inye ya ụfọdụ wezuga mgbe m kwesịrị imere ya maka onye ọ bụla, ha na-ahọrọ idebe onwe ha, ma ma ihe ọ bụla, ihe ha maara ka ndị ọzọ wee dịrị na amaghị ama na n'okpuru njikwa ha!
Ikpalite na mmụọ bụ nnabata, gịnị bụ mbido? Ibute bụ imeghe ihe omuma, nke ihe ndị a niile: onye anyị bụ onwe anyị na ndị ọzọ, gịnị ka anyị na-eme ebe a n'okpuru, iji ihe agha ime mmụọ dị a weaa ka anyị kwesịrị iji mee ya?
E nwere otu puku ụzọ iji zaa ajụjụ ndị a niile, yabụ ịmalite: ị nwere ike ịhụ akwụkwọ ma ọ bụ ederede na-agwa gị okwu nke na-eme ka ị "pịa" ma ọ bụ bụrụ "igodo", ị nwere ike izute mmadụ. 'nke nwere otu mmetụta ahụ na gị, ma ọ bụ soro usoro ihe omume telivishọn, ma ọ bụ hụ mkparịta ụka nke na-emetụtaghị gị na ebe ọ bụla (na-arụ ọrụ, n'okporo ámá, na ụgbọ oloko, na ụzọ ụgbọ oloko ... ) nakwa na ọ nwere otu mmetụta ahụ ị nwere ...
Mana ụzọ kachasị sie ike, n’ihi na ọ dabere na gị onwe gị, anaghị ekepụta ịdabere n’ebe onye ọ bụla nọ ma ọ naghị eweta ihe egwu ma ọ bụ nsogbu ọ bụla bụ ekpere; n'ezie, kedụ ihe egwu dị na ikpe ekpere ma ọ bụrụ naanị na anyị na-akpọku ma mara ka esi akpọku naanị onye kere ihe niile na anyị na-ekwu nke ọma na mbido ekpere anyị?
Ee, ọ dị oke mkpa mgbe anyị na-ekpe ekpere ichetara oge ọ bụla ndị anyị na-agwa okwu ka ọ ghara ịkpọ ndị ahụ na-adịghị mma!
Ya mere, n'ekpere bu isi ihe nke ime ka ndi mmadu bilie.
Otú ọ dị, ọ ga-egbu dị ka a ụkpụrụ enweghị ntụpọ nke mejupụtara atọ nkebi: mbụ bụ n'ime ọcha site na arịrịọ ahụ maka mgbaghara, nke abụọ bụ na Daalụ maka ihe ọma niile e mere maka gị n'etiti Oge ikpeazụ ị kpere ekpere na mgbe ị meghachiri ya, nzọụkwụ ikpeazụ bụ maka mkpesa ma ọ bụ ịrịọ Onye Okike na ndị nna nna.
Nke a bụ usoro zuru ezu, mana n'ime usoro nke ọ bụla a ga-asọpụrụ iwu ọzọ.
1) Arịrịọ mgbaghara (lee “arịrịọ mgbaghara n’oge nke Aquarius”)
Ekpere n'etiti Kongo, m na-ewere ihe atụ a n'ihi na abụ m otu, na-amalitekarị site na bravos atọ (makunkus) nke dị na sekọnd ole na ole iji gosi Onye Okike na ndị nna nna anyị na-amalite!
Askrịọ mgbaghara site n’aka Onye Okike nke ihe nile anyị ji ụgwọ ndụ na ịhụnanya bụ ịghọta ebe ọ bụ na emebiwo iwu nke Lovehụnanya n'otu oge ma ọ bụ n'oge ọzọ n'oge anyị na-arịọ mgbaghara ma ọ bụ Onye Okike ka anyị ga-arịọrịrị arịrịọ a ebe ọ bụ na anyị agaghị ada ada n'ihe banyere onye ji anyị ụgwọ na ndụ anyị na ihunanya, na iwu so ya!
Askrịọ mgbaghara bụ ime ka mmadụ dị ọcha, ya bụ ịsacha onwe ya n'ime onwe ya, kamakwa ime ka udo dị ma guzobe udo n'ime onwe ya, mana maka nsonaazụ a ga-enweta, ọ ka dị mkpa ịme ya. na atụmatụ abụọ:
a) Na-arịọ Onye Okike maka mgbaghara maka nsogbu ọ bụla anyị meere ndị ọzọ n'echiche, okwu, omume, n'amaghị ama na-amaghị ama n'oge oge niile mmadụ na-ajụ; oge mbụ anyị na-arịọ site na ọmụmụ ruo ụbọchị anyị na-eme ya, yabụ, maka oge niile mgbe na ụbọchị ruo ụbọchị, anyị na-arịọ maka site n'otu oge (dịka ọmụmaatụ n'ụtụtụ) rue ọzọ (dịka ọmụmaatụ na mgbede) mana anyi n'achokwa maka nsogbu anyi mebiri onwe anyi !
Ee, rịọ mgbaghara kwa maka mmerụ ahụ anyị meere onwe anyị, n'otu ụzọ ahụ anyị mere ndị ọzọ, maka na udo adịghị ma ọ bụrụ na anyị echefu onwe anyị n'ọkwa a!
b) Nye mgbaghara, ya mere gbaghara ndi ozo ihe ha mehiere anyi n'otu oge dị ka a): malite na ọmụmụ maka oge mbụ, wee si n'otu oge gaa na nke ọzọ maka ụbọchị ọ bụla mgbe nke ahụ gasịrị.
Inye mgbaghara, ya mere ịgbaghara ndị ọzọ, bụ ịsị nke ọma maọbụ n'ime omimi nke onwe gị "n'ihu gị Nzambia Mpungu (nke a bụ aha Onye Okike na Kikongo), dịka aha ị nyere ya, agbaghara m. ndị ọzọ nsogbu niile ha nwere ike imere m n'ụzọ niile enwere ike, nke m maara ma ọ bụ na amabeghị kemgbe amụrụ m (oge izizi) ruo taa na, maka ụbọchị ndị na-esote, kemgbe oge dị otu a (dịka ọmụmaatụ n'ụtụtụ) ruo mgbe ndị ọzọ (na mgbede dịka ọmụmaatụ) ”.
Grantgbaghara mmehie pụtakwara n'ezie na anyị ga-ekwupụta n'ihu Onye Okike na ọ bụ otú ahụ ka ọ dịkwa na-agbaghara onwe yaọbụlagodi ịgbaso otu usoro ahụ iji gbaghara ndị ọzọ, ya mere: "n'ihu gị Nzambia Mpungu, agbagharakwa m onwe m maka mmerụ ahụ m merụrụ onwe m n'ụzọ niile enwere ike, nke m bụ maara ma ọ bụ na ọ bụghị kemgbe amụrụ m (maka oge mbụ) ruo taa na, maka ụbọchị ọ bụla mgbe nke ahụ gasịrị, site na oge ụfọdụ (dịka ọmụmaatụ n'ụtụtụ) ruo oge ọzọ (na mgbede dịka ọmụmaatụ).
Ozugbo emechara uzo abuo abuo a, igha eche na "di“ ocha ”n’oge ahu ma oga adigide rue mgbe ichoro imebi Iwu nke Lovehụnanya!
Ọ bụrụ na nkọwa ndị a eyighị ka o doo gị anya, zoo aka na ederede m na "kingrịọ mgbaghara n'oge Age nke Aquarius".
N'ọnọdụ ọ bụla, ebe ọ bụ na ị dị ọcha, na ị dị ọcha, ị nwere ikele ekele maka uru niile e meere gị.
2) I meela
Ọ bụ ekelela nani Onye Okike kamakwa ndị niile na-enyere ya aka imejupụta arịrịọ anyị ebe a n’okpuru, ya bụ ikwu ihe niile ndị nna ochie rịgoro, ndị niile ghọrọ Kraist ma ọ bụ ndị enwupụtara enwu, enwere ọnụọgụ ole na ole n'ime ha na mmadụ ma ebe ahụ onye ọ bụla ga-aguputa ndị kwekọrọ na omenala nna nna ya na naanị ndị ahụ.
Kpebisie ike imata nna ochie rịgoro, nwee nghọta, ma ọ bụ elu nye Kraist ?
Ọ bụchaghị onye jiri ike pụrụ iche nke ịhụnanya wepụta onwe ya, nke ga - eduga ya ime omume echefu echefu banyere ndị ọzọ, onye nyefere ndụ ya nye ndị ọzọ (ọbụlagodi obere ihe, ọ bụghị nke zuru ụwa ọnụ), nke na-awụsịghị ọbara, ma e wezụga nnukwu nnukwu ihe, mana ọtụtụ ga-enwerịrị nkwafu ọbara ma ọ bụ bụrụ ihe kpatara ọnwụ nke ndị ọzọ!
Ozugbo ị matara ha, ọ pụtara na, ọ bụrụ na ị bụ oji, ị ga-akpọ ndị nna ochie ojii dịka Kimbangu, Matsua, Bueta Mbongo, Biayenda, Toko, Kimpa Mvita, mama Mafuta, mama Ngunga, mama Mwilu, mama Anuarite ...
Ozugbo anyi matara ndi nna ochie a na anyi ekpebie ihota na ekpere ya maka ekele kamakwa maka mkpesa, n'otu oge dika Onye Okike, o ga adi nkpa ikwuputa ha mgbe anyi kpesiri Onye Okike obughi nani na ekele kama na akụkụ iwe iwe, n'ihi gịnị?
N'ihi na mgbe mmadụ nwetara nrịgogo ma ọ bụ ihe ọmụma, ọ na-aghọ "chi" ebe ọ bụ na e kwere ka o yikwasị Kraịst, akụkụ ahụ nke Onye Okike nke ezubere maka ndị na-abụghị karịa ihunanya na ikuziri ndi mmadu ihe banyere ihunanya ma obu Kimuntu (lee “onwere ihe ojii ma obu ocha n’ime ime mmuo?”).
Ọ bụ n'echiche a na ọtụtụ na-ekwu banyere chi ọ bụghị naanị Chineke, nke a pụtara na ndị toro ogo n'ọkwa a tozuru oke ịghaghachi ma ọ bụ, nke ka mma, ịpụta na “ọchịchị” nke Onye Okike iji zaghachi n’ihe ụwa a chọrọ nke na-aga n’ihu nke ịhụnanya ma bụrụkwa ihe kwesịrị otuto!
Ya mere, n'ekpere m Kongo, ka ihe atụ, aghaghị m ịsị:
"Ana m ekele gị Nzambia Mpungu (ọ bụ aha Onye Okike na Kikongo) maka uru niile ị rụzuru kemgbe m mụrụ m (maka ekpere mbụ) ruo taa, ana m ekelekwa ndị nna nna m, ndị tatas Matsua, Kimbangu, Bueta Mbongo, Biayenda, mamas Mafuta, Kimpa, Ngunga, Mwilu na ndị ọzọ niile maka nke ahụ ”.
Emesịa ụbọchị nke ọ bụla, ọ dị mkpa iji gosipụta ekele ya site n'oge ụfọdụ (dịka ọmụmaatụ n'ụtụtụ) ruo oge ọzọ (na mgbede dịka ọmụmaatụ): "Ana m ekele gị Nzambia Mpungu maka uru niile ị nwere ike ịrụzu maka m kemgbe ụtụtụ rue anyasị a ma ọ bụ kemgbe mgbede gara aga rue ụtụtụ a ana m ekelekwa ndị nna nna m tatas… na mamas well yana ndị ọzọ niile maka nke ahụ! ".
Ozugbo ekele nye Onye Okike na ndị nna ochie ndị anyị họọrọ aha ha n'ihi na anyị maara akụkọ nke onwe ha na nke a na-eweta obi ike na ha, anyị nwere ike ịga n'ihu na ọkwa nke mkpesa ma ọ bụ arịrịọ.
3) Udo ma ọ bụ arịrịọ n'ekpere
N'ebe a kwa mkpesa ma ọ bụ arịrịọ na-agwa ma Onye Okike ma ndị nna nna, dị ka ekele, mana ebe a, anyị ga-echeta otu isi iwu: mkpesa n'oge ọ bụla, ọzọ mgbe ọzọ.
Akwukwo nso bu ihe atu:
Maka mụ Kongo, arịrịọ m na Nzaghachi Mpungu (ọ bụ Onye Okike na Kikongo) yana kwa ndị nna ochie na-enye ìhè Kongo, ya mere: "Nzambia Mpungu Tulendo wa vanga zulu ye ntoto (Chineke Pụrụ Ime Ihe Niile nke eluigwe na ụwa) , A na m ario gi ka i nyerem aka ka m teta n'ime mmuo, ya bu ka m megheere onwe m, anam aju kwa otu ihe ahu ndi nna ochie m, tatas… na mamas well tinyekwara ndi nile ndị ọzọ ”na m na-agwụ“ Nge ta ”(yabụ!) ma ọ bụ“ E nkassukulu, E tia! Ma ọ bụ "Nzambi wa bonga, wa sa!" Nke pụtara otu ihe ahụ!
A na m agbaso arịrịọ nke abụọ: "Nzambia Mpungu Tulendo wa vanga zulu ye ntoto (ma ọ bụ naanị Nzambia Mpungu) A na m arịọkwa gị ka ị mee ka m chọpụta ikike mmụọ nke dị n'ime m site na ịkpọte ha, m na-arịọkwa otu ihe ahụ nke nna nna tatas… na mamas well nakwa ndị ọzọ niile! “Nge ta” imecha ma ọ bụ “E nkassukulu, E tia” ma ọ bụ “Nzambi wa bonga, wa sa! ".
Emechaa m gafee na nke atọ: “Nzambia Mpungu, a na m arịọ kwa gị ka m mee ka m mara ihe m bụ ebe a n’okpuru, ya bụ, ịsị ozi m n’elu ụwa, a na m ajụkwa otu ihe ahụ ndị nna nna m tatas. .na ndị mamas ... yana ndị ọzọ niile, Nge ta (ma ọ bụ ...) "
Ọ bụrụ na m nwere arịrịọ ọzọ, ana m eme ya site na ịgwa ya Onye Okike na ndị nna ochie, ma ọ bụghị, m na-emechi ekpere m site na bravos atọ dị na sekọnd ole na ole iji gosi na m mechara!
O nwere ike iwe ezigbo oge tupu ị gụọ akwụkwọ, ma ọ gaghị adị ogologo oge tupu ị mụọ ya, ebe ọ bụ na ị na-ewe naanị minit ise ruo iri ihe dị ka minit ise ma ọ bụ iri kwa ụbọchị na ihe i nwere ike ịnwale ma ọ bụrụ na i kwenyelarị na Onye Okike?
Ndụmọdụ ikpeazụ, kpee ekpere ma ọ dịkarịa ala n'ụtụtụ, iji nwee udo na mmụọ ụbọchị niile yana mgbede ịrahụ ụra n'udo, mana ewepụghị ya ịme ya n'oge ọ bụla ọzọ ị hụrụ ya. ihe dị mkpa!
Mmalite nke phenix